पढ्न मन लाग्दैन ? पढेको कुरा धेरैबेरसम्म टिक्दैन ? समाधानका उपायहरू -योहोखबर
पढ्न मन लाग्दैन ? पढेको कुरा धेरैबेरसम्म टिक्दैन ? समाधानका उपायहरू
काठमाडौँ,१९ असार - पढ्नु र पौडिनु उस्तै-उस्तै हो रे, तरिका जाने सजिलै पार गर्न सकिन्छ, नजाने डुबिन्छ । यसर्थमा पनि पढ्ने कुरा नितान्त प्राविधिक एवम् मनोवैज्ञानिक कुरा हो । त्यसैले हामीले बलपूर्वक पढ्न खोज्नु हाम्रो मुर्खता हो ।
अर्कोतर्फ, मन नलागी नलागी कुनै काम गर्दा सो काम पीडादायी पनि हुन जान्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष त यसरी जबर्जस्ती पढ्न खोज्दा मानिसको सिर्जनशीलता पनि नष्ट हुँदै जान्छ । यसै पढाइलाई पढुँपढुँ लाग्ने, पढेर छिटो बुझिने र पछिपछिसम्म पनि सम्झिरहने बनाउन पाए बिद्यार्थी जीवन कति सुन्दर हुँदो हो रु भन्ने सोचमा सबै हुनुहुन्छ होला ।
रुची र आनन्दका साथ कसरी प्रभावकारी रुपमा पढ्ने ? पढ्नुहोस् केही उपायहरू
अरुलाई भन्नुस्र नभन्नुस् तर आफ्नो मनलाई आफ्नो गन्तव्यका बारेमा स्पष्ट पार्नै पर्छ । गन्तव्य प्रष्ट छैन भने पढ्नमा अल्छी लाग्ने, विषय कठिन लाग्ने कुनै पनि बहानामा पढाइ छोड्न खोज्छ मनले । मैले आज के पढ्नुछ र कति पढ्नु छ रु सो प्रष्ट हुनै पर्छ । अनि आज मैले यति पढें भने के हुन्छ रु मेरो जीवनको लक्ष्यमा यसले के प्रभाव पार्दछ, सो पनि जोड्न सके अझ राम्रो ।
कति समयभित्र के पढ्नै पर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमा नभइकन पढाइले प्राथमिकता पाउँदैन । अन्य कुरा हावी हुन्छन् । परीक्षाको २र४ महिना अगाडि र परीक्षाको २र४ दिन अगाडिको पढाइमा फरक हुनुको कारण पनि यही हो ।
मनोरञ्जनरमस्तीले जो(कोहीको मनलाई सजिलै तानिहाल्छ । यसकारण पनि हामीले हाम्रो पढाइलाई पनि मनोरञ्जनसँग जोड्न सक्यौं भने पढेको कुरा सजिलै बुझिन्छ । त्यतिमात्रै नभएर पछिपछिसम्म पनि यो टिकिरहन्छ ।
यसका लागि आफैंले आफ्ना सकारात्मक पक्षहरुलाई हाइलाइट गर्दै जानु उत्तम हुन्छ, अरुले वाह(वाह गरेर सिर्जना भएको आत्मविश्वास भन्दा यो एकदमै दिगो र प्रभावकारी हुन्छ ।
५.तपाईंले किन पढिरहनु भएको छ ? स्पष्ट कारण बनाउनुस्
बिनाकारणको पढाइले कहिल्यै तपाईलाई सोचेको गन्तब्यमा पुर्याउने छैन । यो पाठ किन पढ्ने रु अहिले नै किन पढ्ने रु लगायतका सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ तपाईसँग । अन्यथा तपाईको मनले तपाईलाई पत्याउँदैन । जसको परिणाम पढ्नमा फिटिक्कै रुची रहँदैन । गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने सुविधा भएसम्म पढाइ लगायत कुनै पनि कार्यहरु प्रभावकारी हुँदैनन् । यी सबैकुरा प्रष्ट पार्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईंको मनले विश्वास गर्छ । पढ्नमा सहयोग गर्छ ।
त्यसैले पढाइलाई परिणाममा विभाजन गर्नुस्, कति पढ्नुपर्ने हो रु कति सकियो र कति बाँकी छ रु यी सबै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ तयार पार्नुस् ।
४०० दिन अघि २०७६ असार १८ १९:५२ मा प्रकाशित